Pringles: Konke Kwaqala Ngamakhukhi, Futhi Kwaqhubekela KuSihlalo WeRobotic - I-Potato System Magazine
Ama-Pringles: konke kwaqala ngekhukhi, futhi waya esihlalweni se-robotic
в Indaba Yempumelelo, Ukuphinda usebenzise kabusha
Ngokusemthethweni, ama-Pringles chips kudala abizwa ngokuthi amakhukhi, ngoba okuqukethwe amazambane kuwo aphansi - ama-42% kuphela, okunye kufulawa nesitashi. Ngenxa yale ndlela ehlanganisiwe, iProcter & Gamble, eyayinomkhiqizo kuze kube ngu-2011, yakwazi ukugwema ukukhokha intela eyenyuka isikhathi eside, kwakubiza kakhulu ukukhiqiza ama-chips e-UK.
Ngo-1956, umsebenzi wakwaProcter & Gamble u-Alexander Liepa, owayengusokhemisi ngokomsebenzi, weza neresiphi yala machips. Kodwa kumthathe eminye iminyaka eminingana ukuyiphelelisa futhi athole nokutshalwa kwezimali, ngakho-ke iPringle's Newfangled Potato Chips ayibonanga emakethe yaseNyakatho Melika kwaze kwaba ngu-Okthoba 1968.
Ngokwenguqulo eyodwa, igama lavela ngengozi ngokuphelele. Abasebenzi bakwaProcter & Gamble baphule amakhanda bezama ukuqhamuka nakho. Abanye babo, bevula umkhombandlela, babona igama lePringle Drive, elalisedolobheni laseCincinnati, e-Ohio. Kukhona enye indaba - ama-chips aqanjwa ngoMark Pringle, owathi ngo-1937 waphakamisa indlela entsha yokucubungula amazambane. Yiba noma kanjani, igama elithi Pringles likuthandile impela ukuphathwa kwenkampani futhi lamukelwa.
NgoMeyi 2009, iNkantolo eNkulu yaseLondon yanquma ukuthi amachips abe ngamazambane, ngakho uProcter & Gamble kwadingeka akhokhe intela eyi- $ 100m ($ 156m) ngenani elengeziwe eminyakeni edlule lapho ama-chip ayethengiswa khona njenge-snack e-UK, kanye nokukhokha ngokuzayo. £ 20 million ngonyaka.
Ngo-1994, i-UK yaqala ukusebenza umthetho osungula inqubo yokubiza intela eyengeziwe. Ngokwemithetho, ayikho intela kokudla okuningi ezweni. Okuwukuphela kokuhlukile yimikhiqizo eyenziwe ngamazambane, kufaka phakathi amafries aseFrance, ama-chips nezinto ezifanayo. Sekuyiminyaka eminingana, iProcter & Gamble iphikisa ngokuthi amachips ayo aqukethe amazambane amancane kakhulu ukuthi angakhokhiswa intela.
Ngo-2011, iProcter & Gamble yanquma ukuthengisa amalungelo kumkhiqizo wakwaPringles kwaDiamond Foods Inc, okuwabeka ku- $ 2,35 billion.Kodwa ngesizathu esingaziwa, isivumelwano asizange siphumelele. Kodwa-ke, ngo-2012, abakwaKellogg's, abakhiqizi bokudla abahamba phambili e-United States, bathenga lo mkhiqizo ngo- $ 2,7 billion.
Ku-2018, umenzi wokudla okusheshayo waseKellogg nowaseVietnam u-Acecook wahlangana waletha ama-noodle asheshayo emakethe, abizwa nangokuthi iPringles, noJulius Pringle odumile ekuphaketheni. Ekuqaleni, ama-noodle ayethengiswa kuphela eJapan, bese evela e-United States.
NgoFebhuwari 2020, uKellogg ubambisene neGravitonus, uphiko lweWARP, ukwethula isihlalo sokudlala se-Feeder. Inesongo lokuzilolonga elakhelwe ngaphakathi, lihlola ukusebenza komdlali futhi lithumela idatha kuhlelo lokusebenza olukhethekile. Ngokuya ngabo, uhlelo lubala isigqi esifanele sokudlala somnikazi. Ngaphezu kwalokho, kufakwa ingalo eyirobhothi esihlalweni, eletha ama-chips emlonyeni womdlali lapho elambile.
Namuhla amaPringles adayiswa emazweni ayi-140 emhlabeni jikelele. Futhi ngakunye kwabo, abathengisi bakaKellogg bakhe umugqa othile wama-chips alo mkhiqizo.
Tags: Iphuthaama-chips ukukhiqizaizicubu
Ngo-2020, cishe imindeni eyizinkulungwane ezingama-3,5 eTyva yazuza ekusekelweni yiphrojekthi yezenhlalo yePotato